臺北市新移民專區網站緬甸文版-ကလေးထိန်းကူ နှင့်စီးပွားရေးဝင်ငွေထောက်ပံ့မှု။
အားနည်းသည့် အိမ်ထောင်စု ၏ ကလေးထိန်းအုပ်ရန် ကူညီရေး
သန်းခေါင်စာရင်းသည် ဤ မြို့တွင်ရှိ၍အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်များ တွင် တစ်ချက်ချက် နှင့် ကိုက်ညီ သော အသက် ၁၂ နှစ် အောက် ကလေးများ။
၁။ ဤမြို့ သတ်မှတ်သော ဝင်ငွေနည်းအိမ်ထောင်စု။
၂။ ဤဌာနခွဲတာဝန်လွှဲပေးပြီး သူတပါးအိမ်ထောင်စု တွင် မှီခိုနေထိုင်သော ကျောင်းတက်အသက် မရောက်သော ကလေးများ။
၃။ ဤဌာနခွဲတာဝန်လွှဲပေးပြီး ကလေးထိန်းကျောင်း တွင် နေရာချထားသော ကလေားများ။
၄။ အန္တရာယ်အိမ်ထောင်စု ၏ ကလေးများ။
၅။ အထူးအခြေအနေ အိမ်ထောင်စု ၆ နှစ် အောက် ကလေးများ။
၆။ ဤဌာနခွဲ ခန့်မှန်း ၍ အရေးတကြီး ပြောင်းလဲ ထိန်းအုပ်ရမည့်ကလေးများ။(ကလေး ၏ ထိန်းအုပ်သူ သင့်လျှော်စွာ ထိန်းအုပ်ရန် မရှိသောကြောင့် ဤဌာနခွဲ ခန့်မှန်း ၍ အရေးတကြီး ပြောင်းလဲ ထိန်းအုပ်ရမည့်ကလေး။)
လူမှုဌာနခွဲ အမျိုးသမီး သက်သာချောင်ချိရေး နှင့် ကလေးထိန်းအုပ်ရေး ဌါနစု--၁၉၉၉(အခြားခရိုင် ဝ၂-၂၇၂ဝ-၈၈၈၉)တဆင့် ၁၆၂၃-၁၆၂၅
ယာယီ ကလေး ထိန်းအုပ် ရန် ကူညီရေး(ဌာန၊ ကလေးထိန်း နှင့် အိမ်ထောင်စုတွင် ယာယီ ထိန်းaအုပ်ခြင်းဖြစ်သည်)
သန်းခေါင်စာရင်းသည် ဤ မြို့တွင်ရှိ၍ အောက် ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်များ တွင် တစ်ချက်ချက် နှင့် ကိုက်ညီ သော အသက် ၁၂ နှစ် အောက် ကလေးများ။
၁။ ဤမြို့၏ ဝင်ငွေနည်းသော၊ ဝင်ငွေအလယ်လတ်နည်းသော အိမ်ထောင်မျးကိုစာရင်းပြုစုခြင်း
၂။ မိဘ တစ်ဘက် သည် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်သည်။
၃။ မိဘ တစ်ဘက် သည် ကိုယ်၊စိတ် မသန်စွမ်းသူ ဖြစ်သည်။
၄။ အိမ်ထောင်စုတွင် အတူတူ နေထိုင်သော ညီအကို မောင်နှမ တစ်ယောက်ယောက် သည် ဤမြို့မှ ထုတ်ပေးသော ကိုယ်၊စိတ် မသန်စွမ်းသူ စာအုပ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်အတွင်း ဆေးရုံးထုတ်ပေးသော ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း ထောက်ခံစာ ကိုင်ဆောင်သည်။
၅။ အထူးအခြေအနေ အိမ်ထောင်စု ကူညီးရေး နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ မျဉ်းစောင်း ၁ အချက် ၁၊၂၊၃၊၅၊၆ နှင့် ကိုက်ညီပြီး ၆ နှစ် အောက် သား သမီး(သို့မဟုတ်)မြေး။(အထူးအခြေအနေ အိမ်ထောင်စု သားသမီး ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်သည်)
၆။ မိဘ တစ်ယောက် တည်း သာ ရှိသော အိမ်ထောင်စု။
၈။ မိဘ တစ်ဘက် သည် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်၍ အလုပ် အကိုင်ရှာရသူ ဖြစ်သည်။
၉။ ထိုင်းပေမြို့ အိမ်ထောင်စု အကြမ်းဖက်မှု နှင့် လိင့်ကျူးကျော် မှု ကာကွယ်ရေး စင်တာ၊ ဤ ဌာနခွဲ လူမှု သက်သာချောင်ချိရေး အကျိုးဆောင်စင်တာ၊ အမျိုးသမီး သက်သာချောင်ချိရေး အကျိုးဆောင် စင်တာ (သို့မဟုတ်) ဤဌာနခွဲ တာဝန်လွှဲပေး သော သက်သာချောင်ချိရေး အဖွဲ့များ လွှဲပြောင်း ပေးအပ် ပြီး ဤ ဌာနခွဲ အတည်ပြုသော အိမ်ထောင်စု။
လူမှုဌာနခွဲ အမျိုးသမီး သက်သာချောင်ချိရေး နှင့် ကလေးထိန်းအုပ်ရေး ဌါနစု--၁၉၉၉ (အခြား ခရိုင် ဝ၂-၂၇၂ဝ -၈၈၈၉) တဆင့် ၁၆၂၃-၁၆၂၅။
ရပ်ကွက် ကလေးထိန်း စနစ် တာဝန်ယူ ဌာနများ။(ရပ်ကွက် ကလေး ထိန်းစနစ် ဖုန်း နံပတ် ကို ကိုးကာပါ)
ယာယီ ကလေးထိန်းအုပ် ရန် ကူညီရေး သည် တစ်လ စီ အများဆုံး ၄ဝ နာရီး ရှသည်။ အထူး လိုအပ်မှု ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အကျိုး ဆောင် စင်တာ ခန့်မှန်း ၍ ဤ ဌာနခွဲ ခွင့်ပြုလျှင် တစ်လစီ အများဆုံး ၈ဝ နာရီ ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် အများဆုံး ၂၄ဝ နာရီ ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
2နှစ်အောက်ကလေး နေ့ကလေးထိန်း အများပြည်သူ၊ အမည်ခံ အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု 【107ခုနှစ် 8လ 1ရက် အကောင်အထည် ဖော်မှု，107ခုနှစ် 8လ 1ရက်မှစ၍ 2လတွင်း ထောက်ပံ့ အရည်အချင်းပြည့်မီသူ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ရန်，အကျိုးသက် ရောက်မှု 107ခုနှစ် 8လ ထုတ်ပေး မည်】
အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်မှီသည့် အုပ်ထိန်းသူ，ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ပေးပို့သူ，စည်ပင်သာယာရေးသို့ သွားရောက်၍ 、ခရိုင်(မြို့)အစိုးရထံ ဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်အကူအညီ အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ရမည်။：
(一)အပ်နှံသူ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် အခွန်ရုံး၏ ခွင့်ပြုချက် အစီရင်ခံစံညွှန်း စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ ထက်လျော့နည်း(သို့) စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ အခွန်နှုန်း 20%ထက် လျော့နည်းသူ(သို့) စည်ပင်သာယာ ရေး ခရိုင်(မြို့) အစိုးရ လူမှုကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေ အဆိုအရ အလယ်အလတ် ဝင်ငွေ နည်း၊ ဝင်ငွေနည်း အိမ်ထောင်စု(သို့) ချို့တဲ့ မိသားစုများ။
(二)အပ်နှံသူ နေ့စောင့်ရှောက်မှု၊ တစ်ရက်လုံးစောင့်ရှောက်မှု၊ ညစောင့် ရှောက်မှု စသည်တို့၊ အပတ်စဉ် နာရီ30 အထက်။
(三)အပ်နှံသူ အစီရင်ခံကာလတွင်，အဆိုပါ ကလေးအရွယ်တုန်းက အများ ပြည်သူစရိတ် အစိုးရပြန်လည်နေရာ ချထားရေး မရှိဘဲ、ကလေး စောင့် ရှောက်မှု မခံယူ၊ မိဘခွင့် လစာစရိတ် မပါဘဲ ကလေးထိန်းစရိတ် (သို့) အခြား အစိုးရတူညီသော စရိတ်မခံယူ ဘူးသူ။
(四)အပ်နှံသူ တစ်ဦးချင်းသတ်မှတ် စောင့်ရှောက်မှုခံယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေး၊ မသန်မစွမ်း၊ ရှားပါးရောဂါများ(သို့) ထူးခြားအခြေအနေရှိကလေးမဟုတ်လျှင်။
ထောက်ပံ့ငွေပမာဏ（ဤအကြောင်း အရာသည် ထောက်ပံ့ငွေ လဝက် ကျော်、1လမပြည့်သူ 1လတွက် မည်，လဝက်မပြည့်သူ လဝက်တွက် မည်）：
ပုဂ္ဂလိက၊ အများပြည်သူ စောင့်ရှောက် မှု စင်တာသို့ စောင့်ရှောက်မှုပို့သူ：
1.သာမန်မိသားစု (ဝင်ငွေ အခွန်နှုန်း 20%ထက် လျော့ နည်း)：ကလေး တစ်ဦးလျှင် လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ 3,000ယွမ်။
2.အလယ်အလတ် ဝင်ငွေနည်း မိသားစု：ကလေး တစ်ဦးလျှင် လစဉ် ထောက်ပံ့ငွေ 5,000ယွမ်။
3.ဝင်ငွေနည်းနှင့် ချို့တဲ့ မိသားစု：ကလေး တစ်ဦးလျှင် လစဉ် ထောက်ပံ့ငွေ 7,000ယွမ်။
ဤမြို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ပုဂ္ဂလိကစင်တာ၊ နေအိမ် စောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုပုဂ္ဂိုလ်များ：
1. သာမန်မိသားစု (ဝင်ငွေ အခွန်နှုန်း 20%ထက် လျော့နည်း)：ကလေး တစ်ဦးလျှင် လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ 6,000ယွမ်။
2. အလယ်အလတ် ဝင်ငွေနည်း မိသားစု：ကလေး တစ်ဦးလျှင် လစဉ် ထောက်ပံ့ငွေ 8,000ယွမ်။
3. ဝင်ငွေနည်းနှင့် ချို့တဲ့ မိသားစု：ကလေး တစ်ဦးလျှင် လစဉ် ထောက်ပံ့ငွေ10,000ယွမ်။
ရှေ့အရည်အချင်း2ခုအနက်တစ်ခု ကိုက်ညီပြီး，တတိယကလေး အထက်，ကလေးတစ်ဦးလျှင် လစဉ် ထောက်ပံ့ ငွေ 1,000ယွမ် ပိုပေးမည်။
အဆိုပါ နေ့ကလေးထိန်း လျှောက်ထားမည့် အချက် အလက်များကို 15ရက်တွင်း အိမ်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာ (သို့) ကလေးထိန်းစင်တာ မှတဆင့် လျှောက်ထား၍ လူမှုရေးရာဌာန အမျိုးသမီး လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ကလေး ထိန်းဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း ပေးပို့နိုင်သည်။ 1999 (အခြားခရိုင်မြို့02-27208889) လိုင်းခွဲ1624~1625
အလုပ်အကိုင် ရှိသူ အိမ်ထောင်စု ကလေး ထိန်းအုပ် ရန် စရိတ် တချို့ ကူညီထောက်ပံ့ မှု။
၁- ထောက်ပံ့ကြေးရယူနိုင်သူ -
မိဘ(သို့ အုပ်ထိန်းသူ) လင်မယား (သို့) မိနှင့်ဘ တစ်ဦးသာရှိပြီး ၎င်းသည်အလုပ်ရှိသူဖြစ်လျှင်၊ (သို့) မိဘအနက် တစ်ဦးသာအလုပ်ရှိလျှင်၊ (သို့) တစ်ဦးသည် အလယ်လတ်၊ပြင်းထန်သော ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းခြင်း၊ (သို့) စစ်မှုထမ်းနေလျှင်၊ (သို့) ၁ နှစ်သို့မဟုတ်ပို၍ကြာသောထောင် ကျသူဖြစ်လျှင်၊ (သို့) လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကို တစ်နှစ် သို့မဟုတ်ပို၍ကြာပြီး စောင့်ကြပ်နေရသူဖြစ်လျှင်၊ (စီစစ်သောအခါ ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းသောလက်စွဲ၊ စစ်မှုထမ်းနေကြောင်း၊ (သို့) ထောင်ချခံနေရသော၊ စောင့်ကြပ်ခံရသော စသည့်အထောက်အထားများကိုပြရမည်။) အိမ်အတွင်း ၂ နှစ်မပြည့်သောကလေးငယ်ကို ကိုယ်တိုင်မစောင့်ရှောက်နှိင်၍ ကွန်မြူနတီရှိ ကလေးထိန်းစနစ်၏ ကလေးထိန်း၊ သို့ ကလေးထိန်းဌာန တွင်ကလေးငယ်များအား စောင့်ရှောက်ရန် ကလေးထိန်းသို့ပို့လျှင် အောက်ပါအချက်များအနက် တစ်ချက်ရှိရမည်-
က-သာမန်အိမ်ထောင်-မိဘ(သို့ အုပ်ထိန်းသူ) လင်မယား သို့ မိနှင့်ဘ တစ်ဦးသာရှိပြီး ၎င်းသည်လတ်တလော တစ်နှစ်၏ အခွန်စီစစ်ကောက်ခံမှုဌာနမှ သက်မှတ်သော အထွေထွေဝင်ငွေပေါင်းသည် သက်မှတ်ချက်အရ အခွန်ပေးရန်မလို (သို့) အထွေထွေဝင်ငွေပေါင်း၏ ဝင်ငွေခွန်သည်သက်မှတ်သော ပမာဏ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုံးမရောက်လျှင်။
(၂) ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်- ဝင်ငွေ အလယ်လတ်နည်းသော မိသားစုအတွက်၊ ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစု၊ အိမ်အတွင်း ၂ နှစ်မပြည့်သော ကြီးထွားမှုနေးကွေးသော ကလေးငယ် (သို့) ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းသော ကလေးငယ်၊ ထူးခြားသောအခြေအနေရှိသော မိသားစု၊ အလွန်ဘေးမကင်းသောမိသားစု။
(၁) ကလေးထိန်းသည် (ကလေးထိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဘာ သာရပ်) သို့ (ကလေးထိန်းသင်တန်းဆင်းသူ) အဆင့် ဖြစ်ရမည်။
က-သာမန်အိမ်ထောင်- ကလေးငယ်တစ်ဦးကို အများဆုံး လစဉ် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀
ခ- ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်- ဝင်ငွေ အလယ်လတ်နည်းသော မိသားစုအတွက် တစ်ဦးစီအတွက် အများဆုံး လစဉ် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ၊ ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစု၊ အိမ်အတွင်း ၂ နှစ်မပြည့်သော ကြီးထွားမှုနေးကွေးသော ကလေးငယ် (သို့) ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းသော ကလေးငယ်၊ ထူးခြားသောအခြေအနေရှိသော မိသားစု၊ အလွန်ဘေးမကင်းသောအိမ်ထောင် စသည် မိသားစုရှိ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို အများဆုံး လစဉ် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၄၀၀၀ ။
(၂) ကလေးထိန်းသူသည် (ကလေးထိန်းတရားဝင်လက်မှတ်ရသူ) သို့မဟုတ် ကလေးထိန်းဌာန သို့ပို့ပြီးထိန်းလျှင်-
က- သာမန်အိမ်ထောင်- ကလေးငယ်တစ်ဦးကို အများဆုံး လစဉ် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ။
ခ- ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်- ဝင်ငွေ အလယ်လတ်နည်းသော မိသားစုအတွက် တစ်ဦးစီအတွက် အများဆုံး လစဉ်ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ၊ ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစု၊ အိမ်အတွင်း ၂ နှစ်မပြည့်သော ကြီးထွားမှုနေးကွေးသော ကလေးငယ် (သို့) ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းသော ကလေးငယ်၊ ထူးခြားသောအခြေအနေရှိသော မိသားစု၊ အလွန်ဘေးမကင်းသောအိမ်ထောင် စသည် မိသားစုရှိ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို အများဆုံး လစဉ် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀။
ကလေးထိန်းမှတဆင့် ဤ မြို့ ရပ်ကွက် ကလေးထိန်း အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ဤမြို့ တရားဝင် ကလေးထိန်း စင်တာ မှတဆင့် လူမှုဌာနခွဲ အမျိုးသမီး သက်သာချောင်ချိရေး နှင့် ကလေးထိန်းအုပ်ရေး ဌါနစု သို့ ပို့ဆောင် --၁၉၉၉ (အခြား ခရိုင် ဝ၂-၂၇၂ဝ -၈၈၈၉) တဆင့် ၁၆၂၃-၁၆၂၅။
ကလေး အစဦးပိုင်း ကုသမှု
ကလေး ကျောင်းမဝင်ခင် စကားပြော၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့် သင်ကြားရေးဘက်မှာ အခြားအသက်တူသော ကလေး
နှင့် မတူလျှင် ကလေး ကို ဆေးရုံသို့ ပို့၍ စစ်ဆေးရ
သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ထိုင်ပေမြို့အစိုးရ လူမှုဌာနခွဲ ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုညံ့ဖျင်းသောကလေး အစဦး
ပိုင်း ကုသသတင်းပေးနှင့် ပြောင်းလဲမိတ်ဆက် စင်တာ
နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ရသည်။
သတင်းအပိုသိရှိလျှင် ထိုင်ပေမြို့ အစိုးရ လူမှုဌာနခွဲ ဝက်ဘဆိုက် သို့ သွားကြည့်ပါ--(http://www.dosw.tcg.gov.tw/)